Xallinta qalbi jabka ee FANUC VISION
Jimce, 08 Meey 2020 by Cristina Maria Sunea
Weelka dhalada caaga
Dhaladaan soo dejinta dhalada ayaa u oggolaaneysa wadayaasha inay si sahal ah ugu faaruqiyaan boorsooyinka, baakidhyada iyo balastarrada dhalooyinka ku jira qashinka 2m³ Kadib, dhalooyinka si tartiib tartiib ah ayaa loo dejiyaa sifeynta aaladaha kala-goysyada, iyadoo laga fogaanayo ciriiriga dhalada.
Habboon oo ku habboon dhalo ballaadhan oo ballaadhan, oo u dhexaysa dhalooyin yaryar ilaa durdurro dhan 5L!
Published in Shaqo la’aan
Qaadashada dhalada madax keliya (goosad flex)
Qaadashada dhaladaani waa dhalo aan xajmi lahayn oo adeegsata aragga garashada dhalada iyo robot loogu tala galey qabashada iyo meeleeynta dhalada. Ka fogaanshaha xoqidda dhalooyinka!
Waxay wax ka qaban kartaa cabirro kala duwan oo alaabooyin ah (laga bilaabo 50ml ilaa 5L) iyo qaabab kala duwan oo dhalooyin ah (wareeg, oval iyo labajibaaran).
Mataanaha dooranaya flex madaxa (qaad qaadaha dhalada)
Qaadhalka flexkan waa dhalo-fure dhalada u adeegsanaysa aragga garashada dhalada iyo robot loogu tala galay qabashada iyo meeleeynta dhalada. Ka fogaanshaha xoqidda dhalooyinka!
Arbacada, 13 Luulyo 2016 by Cristina Maria Sunea
Nidaamka dejinta ee 'Pallet'
Nidaamka lagu soo dejinayo boorsadaani wuxuu qabanayaa salka sanduuqa (pallet), oo tartiib tartiib ayuu sanduuqa ama silo ugu shubaa weelka qashin-qubka.
Miiska dajinta hal lakab oo keliya (saxaarad) - dhalada aan la goyn karin
Shaxdaan korantada soo dejineysa waxay muujineysaa saxamada weelka wareega / laba jibbaaran. Dhalooyinka waxaa lagu ridayaa saxarada suunka mashiinka. Kadib, waxaa lagu quudiyaa suumanka bixitaanka, iyaga oo abuuraya hal saf oo dhalo ah.
Miiska labalaabka lakabka (saxaarad) laba jibbaaran - dhalada aan la goyn karin
Dhaladan oo aan la garanaynin waxay ku tusaysaa saxamada weelka wareega / wareega ah. Dhalooyinka waxaa lagu ridayaa saxarada suunka mashiinka. Kadib, waxaa lagu quudiyaa suumanka bixida, iyagoo abuuraya hal saf oo dhalo ah. Xawaaraha ugu badan: 3000 - 6000 BPH.